Rotaka tany Soanierana Ivongo : naratra mafy, tsy mahatsiaro tena ilay mpiambina ny Prefet | NewsMada
Rotaka tany Soanierana Ivongo : naratra mafy, tsy mahatsiaro tena ilay mpiambina ny Prefet
Nafindra ao amin’ny hopitaliben’i Toamasina, afakomaly, ilay mpiambina manokana ny Prefen’i Fenoarivo Atsinanana, naratra mafy nandritra ilay hetsi-bahoaka nanoherana ny amboletran’ny HVM, tamin’ny fametrahana ben’ny Tanàna tao Ambahoabe Soanierana Ivongo, ny alatsinainy teo.
Mbola tsy mahatsiaro tena any amin’ny hopitaly, araka izany ity mpiambina ny prefet-n’i Fenoarivo Atsinanana ity. Niteraka fifanjevoana teo amin’ireo vahoaka tsy nanaiky ny fanesorana ny olona voafidim-bahoaka ny amboletra nataon’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny fametrahana ben’ny Tanàna HVM vaovao, ny alatsinainy teo tao Ambahoabe Soanierana Ivongo. Tamin’ny 9 ora alina vao nifarana ny fifandonana, araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana. Hatramin’ny fotoana nandalovana tao amin’ny efitrano famelomana aina ao amin’ny Hopitalibe Toamasina, tsy mbola mahatsiaro tena izy noho ny ratra mafy nahazo azy. Mitaraina ihany koa ny fianakaviany noho ny tsy fahampiam-bola hoentina hikarakarana azy. Misy fahatarana anefa ny vola fanampiana omen’ny prefet, kanefa misy fanafody tokony hovidiana maika.
Efa fanaon’ny HVM ny fanaovana amboletra toy izao…
Tsy vao sambany fa efa fanaon’ny HVM ny mametraka ben’ny Tanàna tsy voafidim-bahoaka toy izao. Nihevitra ny hametraka ben’ny Tanàna tsy voafidim-bahoaa toy izao koa tao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambahoabe ny prefet-n’i Fenoarivo Atsinanana ary efa fanineniny ity tsy nahomby ity raha tsy tontosa toy izao koa ny fahadimy teo aloha.
Raha ny loharanom-baovao voaray, fikasihan-tanana Tangalamena nataon’ity mpiambina manokana an’ny prefet-n’i Fenoarivo Atsinanana ity, araka ny baiko azony no tena nahatezitra ny fokonolona ka nahatonga ny fifandonana. Tsy nanaiky ny hanesorana ny ben’ny Tanàna voafidim-bahoaka ny fokonolona kanefa nanao beloha hametraka ilay ben’ny Tanàna tsy voafidim-bahoaka ny prefet-n’i Fenoarivo Atsinanana.
Nambaran’ny ben’ny Tanàna am-perinasa, Mananjara Fidson na Rasomotra fa efa nifanao velirano ny vahoaka fa raha misy fisamboran’ny fitondram-panjakana HVM azy dia vonona hiara-hirohotra miaraka aminy ny vahoaka.
Ho tonga hatraiza ity raharaha ity? Mandeha daholo ny resaka fandrahonana rehetra ary mety hiafara amin’ny fisamborana rehefa ny hafa ny mba mangataka fangatahana hanao fankalazana fety satria lazaina fa hoe manohintohina ny filaminam-bahoaka. Jereo anefa ity ny ataon’ny HVM. Na iza eo amin’ny fitondrana, tokony hanara-dalàna ary tsy misy eo ambonin’ny lalàna izany.